उपचुनावको मुखैमा नेकपाभित्र विद्रोह, सयौं कम्युनिस्ट कार्यकर्ता कांग्रेसमा प्रवेश
नारीले नारीलाई सकरात्मक सोचौँ
प्रधानमन्त्री निवास अझै व्यक्तिको नाममा !
आइसीसी टि-ट्वान्टी उप-क्षेत्रिय क्रिकेट : नेपालले म्यानमारलाई ८ विकेटले हरायो
सभापतिलाई धेरै अधिकार गलत : डा कोइराला
समिरमानसिंह बस्नेतलाई ‘ईनकाउन्टर’ गर्न खोजिएको परिवारको आरोप
प्रजातान्त्रिक समूहद्वारा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको महाधिवेशन बहिस्कार
सरकार, निर्लज्ज र निकम्मा सावित भैसक्यो : नेता धिताल
You are at:Home»मनोरञ्जन»प्रेम पत्र–परी
By esinghadurbar	 February 27, 2018 No Comments
लेखक सन्तोष बजगाई
परी, तिमी मेरो मुुटुुमा हरेक पल धड्कन बनेर धड्की रहेकी छेऊ । म हर श्वास तिम्रै लागी फेरिरहेको छुु । हर समय तिम्रै खुसिकोलागि बाँचिरहेको छुु । खै मलाई थाहा छैन मैले तिमीलाई जीवनभर खुशी राख्न सक्छु की सक्दिन तर तिमीमा मैले मेरा हरेक जीन्दगिको सफलता देखिरहेको छुु । म तिमीलाई प्रेम भन्दा धेरै विश्वास गर्छु त्यसैले मेरो विश्वास एक रति पनि डग्मगाउने छैन म यस कुरामा पूर्ण विश्वस्त छुु । परी, स्वर्गमा परिहरु छन् । असाध्यै राम्रा भन्ने गरेको मैले सानैदेखि नै सुन्दै आईरहेको त थिएं । मलाई पनि तिनै सुन्दरी परीहरुसँग भेट्ने रहर नजागेको होईन । मैले जुन दिन तिम्रो तस्वीर देखेको थिए । मैले त्यहिदिन यो सँसारमा परीको दर्शन पाएको सम्झन्छु । त्यसैले तिमी मेरालागि स्वर्गकी अप्सरा भन्दापनि धेरै माथि छेउ । मैले त्यसैले त तिमीलाई यो शिरमा सजाएको छु । र सदैवशिरमै सजिरहनु तिमी, मैले कहिल्यै शीरबाट तल झार्न नपरोस । परि
, तिमी मेरी प्रेमिका मात्र हैनाँै । प्रेमिका मात्र बनेरपनि पुुग्दैन । म त बराबर हिसाब किताब खोज्ने मान्छे । तिमिसंग पनि बराबर नै माग्छु । त्यसैले मेरो अर्धाङ्गीनी मात्र भएर सुुख पाउँदिनौ । तिमि त मेरो अवि
भावक, असल मित्र, आफन्त, खुसि, सुख, दुु:ख हरक्षणमा मेरै साहार बन्नुपर्छ । असल नियत, सफा चरित्र भएकी सच्चा पतिव्रत नारी बन्नुु छ तिमि एकदिन मेरो जिवनमा । मेरा हर खुसि बनेर मलाई जिवनभर हँसाउन एकदिन बाबा आमाको न्यानो काँख छोडेर तिमि मेरि मनकी रानी बन्नु छ । त्यसैले मेरो भन्दा जिम्मेवारी तिम्रो धेरै छ । परि, नडराउ हिम्मत गर मपनि तिमिजस्तै नारीको कोखबाट जन्मिएको पुुरुष हँु । म भित्र नारीलाई बुुझ्न सक्ने क्षमता चाहेजति मात्रा मै छ । म जिन्दगिको हर मोडहरुलाई बुुझ्न सक्छुु । हरेक परिस्थितिमा तिम्रो साहारा बन्न सक्छुु र तिमिपनि हरेक परिस्थितिमा मेरो साहार बन्ने छौ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ । परि, जिन्दगिको लाईफ चलाउन कसै
न कसैको आवश्यकता पर्छ ।
यो सारा दुनियाले बुुझेकै कुरा हो । तैपनि मैले तिमिलाई एकपटक सम्झाउने कोसिस मात्र गरें । त्यस्तै आवश्यकता तिमि र म दुुवैमा छ र हुुन्छ हर कोहिमापनि । त्यसैले हामी एक अर्काको जिवनको साहारा भएर एक अर्काको सुुख दुु:खको सारथि बन्ने प्रयास गरौं । तिमि पनि पढि लेखेकी शिक्षीत नारी र मपनि बुुझेको मान्छे जिन्दगि नै चलाउन त दुु:ख नहोला तर सोचे जस्तो भने नहुुनपनि सक्छ । त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा दुुवै मिलेर समस्याको समाधान गर्न सकियोस् । भाग्य र भविष्य भन्ने कुरा भाविलेपनि देखेको हुुँदैन । हामी जे कर्म गर्छौ त्यसको फल हामीले पाएरै छोड्छौ । हो यस्तै अठोट बोकेर एक अर्काको जिवनमा खुसि छर्ने कसम खान पर्छ हामीले । त्यो दिनपनि चाँडै जुुर्ने छ । परि, एकदिन मेरो अर्धाङ्गीनि भएर तिमी मेरो घरको संघार जब टेक्न आउने छौ । त्यहि दिनबाट हाम्रो नयाँ जिवनको सुरुवात हुनेछ । त्यसपछि एक अर्काको सह–अस्तित्वलाई सुुईकार गर्दै जिन्दगिलाई सफल बनाउने प्रयास गरौला । सके नाम, दाम सबै कमाउँला नभएपनि खुुसि कमाउँला अनि रमाउँला नि है ? परि, थाहा छ तिमीले पनि मलाई विश्वास औधि गर्छेउ भन्ने । हो मलाई प्रेम भन्दा धेरै तिम्रो विश्वासकै खाँचो छ । मलाई हरेक पाईला कदम कदममा तिमि जस्तै नारीको आवश्यकता छ । जिन्दगिमा जे गर्छुु तिमि र तिम्रो खुसिको लागि गर्न पाउँ । बाँच्दासंगै बाँच्न पाउँ । मर्ने कुरा हाम्रो बसको कुरा हैन । त्यसैले मृत्युु बाहेक हरेक क्षण संगै विताउन पाईयोस् । चाहे जति नै दुु:ख कष्टपूर्ण किन नहोस् जिवन । एक छाक खाएपनि एकसरो लाएपनि आफुुले राजेको बाटोमा रमाउन सकियोस् । तिमिलेपनि दुु:ख पाएं, भोकै भएं, मन लागेको खान, लाउन पाईन भनेर गुुनासो गर्न पाउँदिनौं । यदि यति भयो भने जिवन मध्यम तरिकाले बित्ने छ । त्यसैले हरेक समय हाम्रो जिवन र खुसिकालागि सोच ल ? दु:खमा संगै रुन र सुखमा संग रमाउन पाईयोस् । भगवान पशुपतिनाथसंग यहि कामना गरौं ल । – समाप्त–
साउन १ गतेदेखि नामावली संकलन
निधिले भेटे भारतीय विदेशमन्त्री स्वराज
पार्टीभित्रका अन्तर्घातीहरुलाई निकालिन्छ : देउवा
दुई दिन अघि कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक सर्‌‍यो
सिंहदरबार सेरोफेरो प्रा.लि.
सूचना विभाग दर्ता नं. ३८८/०७३-७४
बुढानिलकण्ठ – १०, कपन, मिलनचोक, काठमाडौं ।
9852832722 | 9807779430 | singhadarbar2070@gmail.com
सिंहदरबार सेरोफेरो टिम:
नवराज पौडेल अध्यक्ष/प्रकाशक/ सम्पादक संवाददाता स्थायी
मनोज पौडेल संवाददाता स्थायी
भुवन श्रेष्ठ संवाददाता अस्थायी
प्रदिप सिलवाल क्यामेराम्यान करार
रमिला पोखरेल संवाददाता करार